▷ ➡️ Discover Online ▷ ➡️ သင်ချစ်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့မလဲ။
ကိုယ်ချစ်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့မလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀တွင် တစ်ချိန်ချိန်၌ ချစ်ခဲ့ကြပါသည်။ စွန့်စားခန်းများ၊ ရယ်မောခြင်း၊ ညစာစားခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်း၊ ... အခြားသူနှင့် မကုန်ဆုံးစေလိုသော အထူးအခိုက်အတန့်များနေထိုင်ခြင်း ၊ သို့သော် ကံမကောင်းသည်မှာ ဤသည်မှာ အမြဲတမ်းမဟုတ်ပေ။
စံပြဖြစ်ပေမယ် ဘဝအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောလူအမြဲတမ်းအောင်မြင်နေတာမဟုတ်ဘူး။ သင့်တွင် တူညီသောပန်းတိုင်များမရှိခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ထပ်မရှိလျှင် သင့်ဘဝသည် ကွဲကွာနေသင့်သည်။ ဤနေရာ၌ ကြီးစွာသောအကျပ်အတည်း ရောက်ရှိလာသည်၊ သင်ချစ်မြတ်နိုးသော သူကို မည်သို့မေ့နိုင်မည်နည်း။
ဤဆောင်းပါးတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အကြံဥာဏ်များ ဆက်တိုက်ပေးပါမည်။ အချစ်ဟောင်းကို မေ့နိုင်အောင် ကူညီပေးပါ။ မင်းဆက်လျှောက်လို့ရတယ်၊ မင်းဖတ်ဖို့ သတ္တိရှိလား။
1 ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့ရမလဲ
1.1 1. ဆက်သွယ်ရေးကိုဖြတ်ပါ။
1.2 2. တစ်ဖက်လူကို တွေးတောဖို့ ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။
1.3 3. မင်းအကြောင်းစဉ်းစားပါ။
1.4 4. သင်ယုံကြည်ရတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောပါ။
1.5 5. အဲဒါကို ကျော်လွှားပြီးသူတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို ရယူပါ။
1.6 6. နာကျင်မှုကို သည်းခံပါ။
1.7 7. ပစ္စုပ္ပန်ကိုအာရုံစိုက်ပါ။
1.8 8. သင့်ရည်းစားဟောင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သတိရပါ။
1.9 9. သင်နှစ်သက်ရာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
1.10 ၁၀။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။
1.11 11. သင်ချစ်ရသူကိုမေ့ရန် စာလုံးပေါင်းပေးပါ။
1.12 12. ဆုတောင်းပါ။
နောက်ပြီးမင်းကိုငါတို့ပေးမယ် 12 အကြံပေးချက်များ ဒါမှ သင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ သူကို မေ့ပျောက်ပြီး မင်းဘဝနဲ့ ဆက်လျှောက်နိုင်မယ်ဆိုတဲ့ ပန်းတိုင်ကို အရောက်လှမ်းနိုင်စေဖို့အတွက် အကောင်အထည်ဖော်လိုက်ပါ။
ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့ရမလဲဆိုတဲ့ ပထမဆုံး အကြံပေးချက်ကတော့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်ဖြတ်ဖို့ပါပဲ။ . လူကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဖုန်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လမ်းခွဲပြီးရင် အဆက်အသွယ်မပြတ်တာက မင်းရဲ့ဒဏ်ရာတွေကို ပြန်ပွင့်စေမှာပါ။ လူတော်တော်များများက ဒီအဆင့်ကို လျစ်လျူရှုပြီး ဟောင်းလောင်းကို အနိုင်ယူဖို့ သူတို့ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုစားမှုကို ဘေးဖယ်ထားကာ ပြန်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်ဆံရေးမဖြတ်နိုင်ရင် အချစ်ရေးက နာကျင်နေရင်တောင်မှ ဒီအချစ်ကို မေ့ဖို့ခက်ပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ လုပ်ရမယ်။ အရာဝတ္ထုများနှင့် လက်ဆောင်များကို ဖယ်ရှားပါ။ သူ့အကြောင်းမတွေးဖို့ သင်ပေးခဲ့တာ။
2. တစ်ဖက်လူကို တွေးတောဖို့ ရှောင်လွှဲလို့မရပါဘူး။
စိတ်ရှုပ်စရာလို့ထင်ရပေမယ့်၊ တစ်ဖက်လူကို အထင်မသေးဖို့ ကြိုးစားလေလေ၊ သူတို့ကို ပိုတွေးလေလေပါပဲ။ စိတ်ပညာရှင်တွေရဲ့ အဆိုအရ ရည်းစားဟောင်းကို မေ့ပစ်ဖို့ ကြိုးစားတဲ့အခါ ဆန့်ကျင်ဘက် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ရရှိပါတယ်။ ငါတို့က အဲဒါကို မမှတ်မိဘူးဆိုတဲ့ အတွေးကို အာရုံစိုက်နေတော့ မင်း အဲဒီလူအကြောင်း တွေးနေပြီ။
အတင်းမတိုက်တွန်းပါနဲ့၊ တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင်နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို သတိရမိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း obsessive မနေပါနဲ့ ၎င်းနှင့်အတူ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
သင်ချစ်ရသူကို မေ့ပစ်နည်းကို နားလည်ရန် ရှာဖွေမှုတွင် သင်သည် စိတ်ဖိစီးမှု၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကြောင့် စွဲလမ်းမှု ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ဒါတွေအားလုံးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ ဆိုးကျိုးများ အနားယူပြီး အနားယူရပါမယ်။ ယခုအချိန်တွင် သင့်လိုအပ်ချက်များကို သိရှိနားလည်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သာယာအောင် ၀တ်စားပြီး မင်းရဲ့ အထီးကျန်မှုထဲ မနစ်မြုပ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ eဆက်ဆံရေးတစ်ခု အဆုံးသတ်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ရှည်သည်းခံမှုဖြင့် ပြုလုပ်ရမည့် အရေးကြီးသော အကူးအပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ .
4. သင်ယုံကြည်ရတဲ့သူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောပါ။
ယုံကြည်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အတွက် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ လူတစ်ဦးအား ၎င်းတို့၏ မလုံခြုံမှုများကို ကျော်လွှားနိုင်ရန် ကူညီပေးပါ။ စကားပြောခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသားအတွင်း၌ သယ်ဆောင်လာသမျှအရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်နိုင်စေပြီး ကျွန်ုပ်တို့နေထိုင်နေရသော တင်းမာမှုနှင့် စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ကူညီပေးသည်။ ကိုယ့်ခံစားချက်တွေကို နားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။ အခြေအနေတွေကို တခြားရှုထောင့်ကနေ ကြည့်တယ်။
5. အဲဒါကို ကျော်လွှားပြီးသူတွေရဲ့ လှုံ့ဆော်မှုကို ရယူပါ။
လမ်းခွဲမှုကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး၊ အဲဒါကို လုပ်ရတာ အခက်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလမ်းခွဲမှုကို ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ချစ်ခင်နှစ်သက်သူများနှင့် အလားတူအခြေအနေများကို ဖြတ်သန်းဖူးသူများထံမှ လှုံ့ဆော်မှုခံရပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် ခွဲခွာခြင်းကို မည်သို့ကျော်လွှားခဲ့ကြသည်ကို နားလည်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အား လှုံ့ဆော်နိုင်ပါသည်။
ဝဘ်ဆိုဒ်များနှင့် ဘလော့ဂ်များ- စာရင်းသွင်းသူများသည် ၎င်းတို့၏ရပ်စဲခြင်းအပါအဝင် ကျန်းမာသောဆက်ဆံရေးများကို လေ့လာရန် အထူးဖန်တီးထားသည့် ချန်နယ်များရှိပါသည်။
ကွန်ရက်များရှိ ဗီဒီယိုများ သို့မဟုတ် ထုတ်ဝေမှုများ- လျင်မြန်သောဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊ လူတစ်ဦးကိုမေ့ပစ်ရန်တစ်စုံတစ်ဦးထံမှအကြံဉာဏ်အချို့အမြဲရှိသည်။
သူငယ်ချင်းများထံမှ အကြံပြုချက်များ ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေတစ်ဦးသည် တူညီသောအခြေနေကို ဖြတ်သန်းဖူးပါက၊ ၎င်းတို့နှင့် စကားပြောဆိုရန် ကြိုးစားပြီး ၎င်းတို့ပြုလုပ်ခဲ့သော အပြောင်းအလဲကြောင့် စိတ်အားတက်ကြွစေပါသည်။
6. နာကျင်မှုကို သည်းခံပါ။
မဖြစ်နိုင်ပုံရသော်လည်း လမ်းခွဲခြင်းမှ ခံစားရသော ဝေဒနာများကို ကျော်လွှားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ဒါက မင်းရဲ့နာကျင်မှုကို လေးစားပြီး ဒီခွဲထွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာနေထိုင်ဖို့ လိုအပ်တယ်။ သင်ချစ်တဲ့သူနဲ့ ခွဲခွာရတဲ့ ဝေဒနာကို ကျော်လွှားဖို့ ကြိုးစားရင်း ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပါဝင်လုပ်ဆောင်ပြီး အရင်းနှီးဆုံးသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုကို ရယူလိုက်ပါ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, လမ်းခွဲမှုကို အမြန်ကျော်ဖြတ်နိုင်သူတစ်ဦးနှင့် သင့်ကိုယ်သင် မနှိုင်းယှဉ်ပါနှင့်. ဤခွဲခွာခြင်းကို ရင့်ကျက်ပြီး တာဝန်သိသောနည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ဆောင်ရန် သင့်စိတ်ကို အချိန်ပေးပါ။
သင်ချစ်တဲ့သူကို ဘယ်လိုမေ့ရမလဲ ခုနစ်ခုမြောက် အကြံပြုချက် အနာဂတ်ကို အတူတကွ စိတ်ကူးမယဉ်ပါနဲ့။ သို့မဟုတ် အတိတ်ကို ဆုပ်ကိုင်ထားပါ။ အဖြစ်များသောအမှားမှာ ပစ္စုပ္ပန်နှင့် ၎င်း၏ရင့်ကျက်မှုကို အာရုံစိုက်မည့်အစား ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အမှန်တရားများကို စိတ်ကူးကြည့်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် သင်လမ်းခွဲရသည့် အကြောင်းရင်းများကို နားလည်ရန်၊ အခြေအနေမကောင်းကြောင်းနှင့် သင်နှစ်ဦးစလုံး အဆင်မပြေကြောင်း ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး မှတ်သားထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
8. သင့်ရည်းစားဟောင်းရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သတိရပါ။
လူတစ်ယောက်နဲ့ ခွဲခွာရတဲ့အခါ ကောင်းတာကိုပဲ သတိရတတ်တဲ့ အလေ့အထရှိပေမယ့် ထားသွားခဲ့ရင် အရာအားလုံးက သိပ်ချိုမြိန်တာတော့ မဟုတ်ဘူးဆိုတာကို သတိရပါ။ ကြိုးစားပါ။ ပြန်ဖြစ်ခြင်းများကို ရှောင်ရှားရန် ၎င်းတို့၏ ချို့ယွင်းချက်များနှင့် အဆိုးမြင်သဘောထားများကို တွေးတောပါ။ သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသော ဆက်ဆံရေးတစ်ခုကို စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ ဤအရာအားလုံးသည် ၎င်းကို မုန်းတီးရမည်ဟု မဆိုလိုပါ၊ သို့သော် ယဇ်ပလ္လင်ပေါ်တွင် ရှိနေသည်ဟု မဆိုလိုပါ။
9. သင်နှစ်သက်ရာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။
နှလုံးရောဂါ သက်သာနေသရွေ့ သင်လုပ်နိုင်တယ်။ သင်နှစ်သက်တဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို အာရုံစိုက်ထားပါ။. သင်နှစ်သက်သည့် လှုပ်ရှားမှုဟောင်းများသို့ ပြန်သွားနိုင်သည်။ သို့မဟုတ် သင့်အား ပျော်ရွှင်စေမည့် အသစ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ပြီးမြောက်အောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ ခံစားချက်အပြင်၊ ဒီနည်းနဲ့ မင်းရဲ့ရည်းစားဟောင်းက ပါဝင်မှာမဟုတ်တဲ့ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နဲ့ ဝါသနာတွေ စတင်ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်မတင်ပါနဲ့။
အဖြစ်များသောအမှားတစ်ခုမှာ လမ်းခွဲခြင်းသည် သင့်အပြစ်သာဖြစ်သည်ဟု ထင်မြင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အပြစ်ရှိတယ်လို့ မခံစားပါနဲ့။ မင်းတာဝန်မကျေဘူးထင်ရင် ငါတို့ဟာ သဘာဝ ချို့ယွင်းချက်တွေနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေရှိတဲ့ လူသားတွေမို့၊ ငါတို့က အမှားတွေ လုပ်တတ်ကြတယ်။ ထို့အပြင်၊ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွင် မကိုက်ညီမှုများသည် လူတို့ကို ဝေးကွာသွားစေနိုင်သည်။
ဒါကြောင့် သတိရပါ။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကို ချမှတ်ဖို့ မင်းနှစ်ယောက်လုံး ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြီ။ နာကျင်ပေမယ့် အနာဂတ်မှာ မင်းလုပ်နိုင်တာက အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာ မင်းမြင်လိမ့်မယ်။
11. သင်ချစ်ရသူကိုမေ့ရန် စာလုံးပေါင်းပေးပါ။
လမ်းခွဲခြင်းကို ဖြတ်ကျော်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် လူအချို့သည် လူတစ်ဦးကို မေ့ပစ်ရန် စာလုံးပေါင်းသတ်ခြင်းကို အားကိုးကြသည်။ ဆက်လက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား လုပ်ဆောင်ရန် ဥပမာတစ်ခုပေးပါမည်။
စာရွက်ဖြူတစ်ရွက်ပေါ်တွင် သင်မေ့လိုသူ၏ အမည်အပြည့်အစုံကို ရေးပါ။
စာရွက်ကို ရေထဲသို့ပစ်ချလိုက်ပြီး အောက်ပါစကားစုကို သုံးကြိမ်ပြန်လုပ်ပါ- “ဒီမြစ်ရဲ့အကွေ့မှာ အပျက်အစီးတွေ ရပ်သွားတယ်။ မင်းက ငါ့ဘ၀မှာ သစ်တုံးလိုပါပဲ။ ဘဝရေစီးကြောင်းမှာ မင်းအခု ကျော်ဖြတ်သွားပြီ။
ဤအလေ့အကျင့်ကို ကျင့်ဆောင်ရန် သင်ယုံကြည်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဲဒါ ဒီလူကို မေ့နိုင်အောင် ကူညီပေးတဲ့ စိတ်လေ့ကျင့်ခန်း စာလုံးပေါင်းတစ်ခုထက်ပို၍ ကျော်လွှားခြင်းနှင့် မေ့ပျောက်ခြင်း၏ သင်္ကေတတန်ဖိုးရှိသည်။
စာလုံးပေါင်းများအပြင် လူများစွာသည် ဆုံးရှုံးသွားသော အချစ်ကိုမေ့ပစ်ရန် ဆုတောင်းကြသည်။ တိုတိုပြောရရင် ဒါဟာ သင့်ဘဝထဲက အချစ်ဟောင်းကို ဖယ်ရှားဖို့ နောက်ထပ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုပါပဲ။ တစ်နည်းဆိုရသော် စိတ်ခံစားမှုများနှင့် နေ့စဉ်ဘ၀တွင် တွေ့ကြုံခံစားရသော ဝေဒနာများကို ဖယ်ရှားရန် တရားထိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဘယ်လိုပဲ ရှုပ်ထွေးနေပါစေ သင်ချစ်ရတဲ့သူကို မေ့ပစ်ဖို့ ဘယ်လိုရှာဖွေခြင်းက သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေမှာပါ. ယခုအချိန်သည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒများကို နားထောင်ရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ပိုမိုရှင်းလင်းသောစိတ်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို အကြံပေးနိုင်ပြီး လူသားအဖြစ် ရင့်ကျက်မှုရှိသည်။
ဒီဆောင်းပါးကနေ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ ၎င်းသည် သင့်အား ကူညီပေးခဲ့ပြီး ဤအခြေအနေတွင် ရှိနေပါက ဤဆင်းရဲဒုက္ခအဆုံးသတ်မည်ကို သတိရပါ။ လမ်းခွဲပြီးနောက် ပထမဆုံးရက်အနည်းငယ်တွင် ခက်ခဲနိုင်ဖွယ်ရှိသော်လည်း တစ်စုံတစ်ဦးကို ကျော်ဖြတ်ရန် လိုအပ်သောအရာကို မကြာမီ သင်တွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။